वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा पाण्डे विजयी | चितवन पोष्ट
वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा पाण्डे विजयी
भरतपुर । बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र यसका उपलब्धिहरु विषयक अन्तरकलेज वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरका प्रेम पाण्डे विजयी भएका छन् । प्रजातान्त्रिक विचार समाज, चितवनले आयोजना गरेको वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा पाण्डे प्रथम भएर नगद पाँच हजार रूपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् ।
प्रतियोगितामा द्वितीय भएर बालकुमारी क्याम्पसकी अञ्जना थपलियाले नगद तीन हजार रूपैयाँ र तृतीय भएर वीरेन्द्र क्याम्पसकी प्रिन्सी काफ्लेले नगद दुई हजार रूपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । चौँथो भएका नारायणी पब्लिक कलेजकी सुकृति घिमिरे र नमुना सेकेन्डरी स्कुल, गैँडाकोटकी सुस्मिता भण्डारीले एक÷एक हजार रूपैयाँ प्राप्त गरेका कार्यक्रम संयोजक जनकराज घिमिरेले जानकारी दिए ।
सहभागी विद्यार्थीहरुले बीपीले देखाएको राजनीतिक बाटो र संघर्षका कुरालाई जोड दिएका थिए । प्रजातन्त्रका सेनानीका रुपमा चिनिने स्वर्गीय बीपी कोइरालाकै संघर्षका कारण वर्तमान राजनीति समाजवादको यात्रामा हिँडिरहेको उनीहरुको भनाइ थियो । प्रतियोगितामा १५ जना विद्यार्थीहरुले सहभागिता जनाएका थिए । प्रतियोगिताको निर्णायकमा डा. एकनारायण पौडेल, राजेन्द्रप्रसाद रेग्मी र दिनेश कोइराला रहेका थिए ।
प्रजातान्त्रिक विचार समाज, चितवनका अध्यक्ष प्राडा देवीप्रसाद कँडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसी, कांग्रेस चितवनका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठ, भरतपुर महानगरपालिका उपप्रमुख एवम् नेपाल महिला संघ, चितवनकी अध्यक्ष पार्वती शाह ठकुरीलगायतको उपस्थिति थियो ।